किन लेखिँदैन महिलाको इतिहास| Janachaso Khabar
जबसम्म महिलाहरुले राज्यका लागि पुर्‍याएको योगदान, संघर्ष र दुःखका कथाहरु इतिहासका पानाहरुमा समेटिदैन तबसम्म इतिहास अपुरो नै रहन्छ । विद्यालय शिक्षा लिएका जोकोहीले पढेको विषय हो –इतिहास । मैले त आई ए मा पनि इतिहास नै मुख्य विषयको रुपमा अध्ययन गरेको थिए । आफ्नो देश, छिमेकी मुलुक र विश्वका इतिहास पाठ्यक्रममा राख्ने चलन पुरानो हो । हरेक पटक इतिहास बारे साँेच्दा मनमा धेरै प्रश्नहरु उब्जिन्छन् –हामीलाई पढाइएका ती इतिहासका लेखक को हुन् ? खास गरी सशक्त शासक र सत्तासीनहरु नै औपचारिक इतिहासका मूख्य लेखक हुन् । आखिर को हुन् ती विजयी सशक्त शासक र सत्तासीनहरु ? मूलतः ती उच्च वर्गका मानिस हुन् र अधिकांश पुरुष हुन् । के ती इतिहास लेखकहरुले आफ्नै अगाडि ती छोरीहरु जसले कुलको इज्जत बचाउन हत्याराहरुबाट काटिए त्यो किन लेख्न छुटाए ? के ती छोरीहरुको चेतनाले हतियार लिएर उभिएका हत्याराका अघिल्तिर निरीह बलि बन्न मौन भएरै स्वीकारे होलान् ? यो संवेदनशील सवाल इतिहासमा किन लेखिएन ?
त्यसकारण पनि बुझ्न सकिन्छ कि उच्च वर्गीय पुरुषले आफू अनुकूल इतिहास लेखेका हुन् । अनि इतिहासको व्याख्या गर्ने जिम्मा पनि उनीहरुले नै पाएका छन् । उनीहरुले लेखेका इतिहासमा धेरै महिलाहरुका अनि अन्य सिमान्तकृत मानिसहरुका संघर्ष छुटेका छन् । महिलाहरुको संघर्ष र दुःखको चित्रण न्यायपूर्ण भएको छैन, सबै छुटेका छन् ऐतिहासिक पानामाहरुमा । इतिहासका पाना पल्टाउँदा महिलाको उपस्थिति नगन्य भएको कारण पनि त्यही हो । महिलाका जति चर्चा हुन्छन्, ती पुरुषको मानसिकता र पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणबाट गरिएका हुन्छन् ।
हामीले नजकिबाट प्रत्यक्ष देखेको, भोगेको र सुनेको छोटो इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले अध्ययन गर्ने इतिहास यो अवस्थामा थुप्रै उपक्रमहरु मात्रै पनि थिएनन् । बरु परिवार, घर, सम्पत्ति, साथीभाइ, नातागोता अनि छिमेकीबीचको बिभाजन पनि भएको थियो सो समयमा । कति महिला मारिए, बलात्कृत भए, कतिको ज्यान गयो, कति असुरक्षित गर्भपतन गराइए भन्ने खास तथ्याङ्क नै इतिहासमा लेखिएन । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा धेरै क्षति भयो परिवार, समाज र राज्यमा नै । कयौँ मानिसहरु पलायन भए, विस्थापित भए । यसै परिवेशलाई सन्दर्भित गर्दै सो समयमा महिलाको अवस्था, अनुभव र संघर्षलाई उजागर गर्ने प्रयास केही महिलाहरुले गरिरहेका छन् । तर त्यो लेखिएको कुरा प्रकाशन गर्न पनि इतिहासकार हुनु भएन वास्तविक तथ्यहरु लेख्नु भएन अनि मात्र बल्ल प्रकाशन हुन्छ नत्र जतिसुकै मेहनतका साथ लेखिएको वास्तविक तथ्यमा आधारित उत्कृष्ट लेख र लेखक, अन्वेषक भएपनि प्रकाशन हुँदैन हाम्रो देशमा ।
विभिन्न समयका महिलाका भोगाइ, आवाज, संवेदना, दृष्टिकोण र अनुभवलाई मौेन बनाइएको वा छुटाइएको इतिहास हामीले पढ्न बाध्य छौँ । औपचारिक र प्राज्ञिक इतिहास लेखिँदा महिलाहरु सीमान्तकृत बनाइएका कारण महिलाका संघर्ष र दुःखलाई समेटिने कोणबाट तथ्यहरु सहितको इतिहास लेखन र विश्लेषण जरुरी ठानिएको छ । विगतको नेपाल एकिकरण देखि हालसम्म आइपुग्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरु जर्वजस्ती बलात्कृत भएका, यौन दासीको रुपमा दुरुपयोग गरिएका, असंख्य अपहरण र हत्या गरिएका, गर्भपतन गर्न बाध्य बनाइएका महिलाको आँसु, रगत पसिनाले चुर्लुम्मै भिजाइएको इतिहास दस्तावेजीकृत गर्दा पितृसत्तात्मक राजनीति गरिएको छ । यो इतिहास लेखनको क्रममा ठूलो भ्वाङ परेको छ । यो भ्वाङ पुर्न अध्ययन, अनुसन्धान र इतिहासको पुनर्लेखन गरिनु आवश्यक छ । महिलालाई मान्छे नगन्ने प्रायःजसो सबै पितृसत्तात्मक समाजले महिलामाथि सधैं नै आफ्ना मान्यता, नियम र कानुन लाद्ने गरेकाछन् । चाहे त्यो धर्म परम्परा, संस्कृतिको नाममा होस्, समुदायको मर्यादा वा गौरवको नाममा होस् या धार्मिक साँस्कृतिक शुद्धताको नाममा होस् । पितृसत्तात्मक समाजले निर्माण गरेका यिनै मान्यताका आधारमा कयौं महिलाको हत्या, बलात्कार, अपहरणका दृष्टान्तहरुलाई सूक्ष्म चित्रण गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।
विभिन्न द्वन्द्वका आयामहरु, १९९० सालको होस् या २०७२ सालको भूकम्प र विभिन्न समयका महामारीमा आफ्नै छोरीचेलीहरु बलात्कृत हुँदा, हत्या हुँनबाट बचाउन सकेनन् कयौँ बाबु, दाजु, काका, मामाले । यस्ता कहाली लाग्दा घटनाहरु भएका इतिहास लेखिएको छैन । के इतिहासमा निरीह बनाइएका तिनिहरुका मौनता मात्रे सुनिन्छन् ? महिला माथि भएका विभेद र गरिएका बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध र हिंसालाई मानिसप्रतिको द्वेष र बदलासँग जोडेर व्याख्या गरेर मात्र पर्याप्त हुन्छ ? महिलालाई केवल शरीर, सम्पति, समुदाय र राष्ट्रको इज्जतमा सीमित गरिनु उचित हो ? दाइजोको कारण भोेग्नु परेको हिंसाका कारण कतिले आत्महत्या गर्नु अर्को महत्वपूर्ण प्रसंग हो नेपालको । महिलाले उठाएका हतियार, अनि परिवर्तनका लागि पुर्‍याएको योगदान र यस्ता समयमा मर्न र मारिन बाध्य बनाइएका महिलाहरुको अवस्थालाई शाहदत प्राप्त गर्ने वीरंगना भनेर मात्र व्याख्या गरिनु कस्तो राजनीति हो यो देशको ? सयौं महिला लासमाथि उभिएर पुरुषले छाँटेको पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादलाई इतिहास भनेर कहिलेसम्म पढीरहने ? यही हो अहिलेको इतिहासप्रतिको मूख्य प्रश्न ? शाहदत भनेर प्रचार गरिएका त्यस्ता घटनाले महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नकारेको ठहर छ हाम्रो ।
अधिकांश महिला आफ्ना लागि आफै निर्णय गर्ने सार्वभौेम मानिस हुन् वा कसैको इज्जत ? सो समयमा महिलाले आफ्ना विचार, तर्क वा चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने झिनो अवसरसम्म नपाएका व्याख्या इतिहासमा नगर्नु कसको स्वार्थ अनुकूल छ ? महिलाहरुमाथि भएका चरम हिंसालाई उचित उल्लेख र व्याख्या ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा छुटेका छन् अहिले हामीले अध्ययन गर्दा । ती असंख्य महिलाहरु हिंसाको चरम रुपसँग साक्षत्कार गर्न बाध्य भएर बनाइए, तिनको पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, चेतना वा दृष्टिकोणले सो समयमा र इतिहासका पानाहरुमा समेत शून्य महत्व पाएको थाहा पाउँदा अहिले सारा स्थापित मान्यता माथि शंका लाग्न थालेको छ । त्यस्ता मौन बनाइएका आवाज सबै टिप्न सके दुनियाँको मौेजुद इतिहासमा कति फरक आउँदो हो ? इतिहासमा लेखिने ठूला पात्रहरुको कथानक निर्माण र व्याख्या भन्दा अलग्ग ती सहायक पात्रका वास्तविकता उधिन्नु महत्वपूर्ण हो जो कहिल्यै कम महत्वका थिएनन् तर तिनलाई महत्व दिएर इतिहासमा लेखिएन । ती सहायक पात्रहरु महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत आदि लगायतका मानिस हुन् । यद्यपी यी समूहका सबै अवस्थाहरु एउटै इतिहासकारले अटाउन सकेन होला तर सबैले पनि अटाएनन् । यसबाट के बुझ्नु जरुरी छ भने इतिहासकारहरुद्वारा इतिहासमा हजारौं पात्र र समूहका संघर्ष दबाइएका छन् भन्ने हो । इतिहासका केही पुस्तक पढिसकेपछि मेरो मनमा उठेका इतिहासप्रतिका प्रश्नले सम्भवतः सदैव झस्काइरहनेछ । हाम्रोमा त्यस्ता कति घटना होलान् जसका लिखित रुपमा महिलाहरुका योगदान र संघर्षहरु छुटेका छन् ? ती सबै खोजेर इतिहासको पुनर्लेखन गर्नसके नेपाल कति फराकिलो देखिँदो हो ? त्यसैले तिनिहरुलाई समेटेर इतिहासको पुनर्लेखन सम्भव छ र पुनर्लेखन गर्नु पर्छ भन्ने निष्कर्ष हो, यो बन्दाबन्दीमा घरमा बसेर मैले इतिहास पल्टाएर पढिरहँदा । किन लेखिएन महिलाको दुःख, संघर्ष र योगदानको उल्लेख्य इतिहास ?
- जानुका न्यौपाने